Ukuya eSaudi Arabia kuKhenketho ukuba ugonyiwe
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » komzila Ngoku » Ukuya eSaudi Arabia kuKhenketho ukuba ugonyiwe
uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeLuxury • iindaba • Xanduva • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • Tourism • Intetho yezoKhenketho • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
I-Saudi Arabia izakuvula imida yayo kubakhenkethi bamanye amazwe ukusuka nge-1 Agasti 2021. Iindwendwe ezivela kumazwe angama-49 ziya kubanakho ukuphonononga uBukumkani baseSaudi Arabia, ukuba bagonyiwe ngokupheleleyo.
I-Saudi Arabia yanciphisa izithintelo zemida kulandela ukuvalwa kwe-COVID-19 kwihlabathi liphela.
Abemi abavela kumazwe angama-49 banelungelo lokufumana i-visa yokhenketho.
Uthungelwano lweHlabathi lezoKhenketho luvuyisile uBukumkani ngokuvula amasango abo kwihlabathi lokhenketho lwamazwe aphesheya.
I-Saudi Arabia ngoku ityale imali ezibhiliyoni kushishino lokuhamba nokhenketho, hayi i-Saudi Arabia kuphela kodwa nokuba liziko lehlabathi lehlabathi leenkokheli zokhenketho ukuba zihlangane zisete imikhwa.
Ukusukela nge-1 ka-Agasti 49, olu tyalo-mali luza kuqala ukuvelisa kwakhona ubukumkani, xa abemi abavela kumazwe angama-XNUMX bemenyiwe ukuba batyelele umhlaba omtsha.
Kwingxoxo yamva nje ehlelwe lolu shicilelo kunye ne Isahluko saseSaudi Arabia soNxibelelwano lweHlabathi lezoKhenkethoKwachazwa: I-Saudi Arabia inezicwangciso ezikhulu kunye neeakhawunti esele ziphumelele kakhulu ukuba zingabeki uBukumkani kwiziko lezokhenketho kuphela kodwa zenze indawo yokuhlanganisana yokwenyani kwabo bakhokelayo kubakhenkethi behlabathi.
Ukuphakama kwakhe kwasebukhosini uGqirha Abdulaziz Bin Naser Al Saud, uSihlalo we-WTN Saudi Arabia Isahluko I-Saudi Arabia ibamba imibutho emikhulu yokuhamba neyokhenketho, kubandakanya uMbutho wezoKhenketho weHlabathi (i-UNWTO), iBhunga lezoKhenketho kwiHlabathi liphela kunye noKhenketho (WTTC), kunye neZiko loKhuseleko loKhenketho kunye noLawulo lweNtlekele (GTRCMC).
Isimo: Iindwendwe ezifuna ukuya eBukumkanini baseSaudi Arabia kufuneka zigonywe ngokupheleleyo.
Abanini beevisa zokundwendwela abagonywe ngokupheleleyo i-COVID-19 baya kuba nakho ukungena kweli lizwe ukusuka nge-1 Agasti 2021, ngaphandle kwesidingo sokubekwa bodwa. Abahambi baya kufuna ukunika ubungqina bekhosi epheleleyo yesinye sezitofu ezi-4 ezivunyiweyo ngoku: iidosi ezi-2 zeOxford / Astra Zeneca, Pfizer / BioNTech, okanye izitofu zeModerna okanye idosi enye yesitofu esiveliswe nguJohnson & Johnson.
Abahambi abagqibe idosi ezimbini zokugonya iSinopharm okanye iSinovac bayakwamkelwa ukuba bafumene idosi eyongezelelweyo yesinye sezitofu ezi-4 ezivunyiweyo eBukumkanini.
I-Saudi Arabia ivule i-portal yewebhu e https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home iindwendwe zibhalise inqanaba lokugonywa. Indawo ifumaneka ngesiArabhu nangesiNgesi.
Ukulungiselela abahambi, iSaudi iphucule iTawakkalna, eliphumelela ilizwe, kunye nokulandelela usetyenziso, ukuvumela iindwendwe zethutyana ukuba zibhalise kunye neenkcukacha zazo zepaspoti. I-Tawwakalna iyadingeka ukuze ungene kwiindawo ezininzi zikawonkewonke eSaudi, kubandakanya iindawo zokuthenga, iimovie, iindawo zokutyela kunye neendawo zokuzonwabisa.
Isibhengezo siza malunga neenyanga ezilishumi elinesibhozo emva kokuba ukhenketho lwamazwe e-Saudi Arabia lurhoxisiwe ngenxa yobhubhane we-COVID-19. I-Saudi Arabia isungule inkqubo ye-e-visa yokhenketho ngoSeptemba 2019.
"ISaudi ijonge ukuvula iingcango zayo kunye neentliziyo zayo kubakhenkethi bamanye amazwe," utshilo uFahd Hamidaddin, u-CEO we-Saudi Tourism Authority (STA). "Ngexesha lokuvalwa, besisebenza ngokubambisana namaqabane ethu kwicandelo likarhulumente nelabucala ukuqinisekisa ukuba iindwendwe zaseSaudi zinokonwabela into ekhumbulekayo, eyiyo, kwaye, ngaphezu kwako konke, amava akhuselekileyo kubo nakwabo babathandayo. Abandwendweli abafuna iindawo zelifa lemveli ezingachazwanga, amava enkcubeko kunye nobuhle bendalo obothusayo baya kumangaliswa kwaye bonwabe xa befumana ulwamkelo lwaseSaudi. ”
Isibhengezo sokuphinda siqalise ukhenketho siza njengoko iSaudi isungula iphulo lonyaka lasehlotyeni lowama-2021, izisa ubutyebi bezinto ezinomtsalane kunye neziganeko kwilizwe. Eli phulo litsha kulindeleke ukuba lingene kwimfuno ebalulekileyo efihlakeleyo phakathi kwabantu basekhaya nakwingingqi, ngakumbi kwiminyhadala yolonwabo, echaphazeleke kakhulu ngamanyathelo okulawula ukusasazeka kwe-coronavirus.
IJeddah iZakhiwo zeSixeko esiDala kunye neZitalato, eSaudi Arabia
Ngaphandle kwesifo, i-2020 ibingunyaka wokuqhekeka kwishishini lokhenketho lwasekhaya eSaudi njengoko abemi nabahlali behlola ilizwe-uninzi okokuqala-luvumela ukuqhubeka kophuhliso lwemisebenzi kunye neemveliso ezintsha ngaphambi kokuvulwa kwamazwe aphesheya.
Iphulo lasehlobo laseSaudi lase2020, elaliqhuba phakathi kukaJuni noSeptemba, lavelisa ukonyuka kwama-33% kwinkcitho kwiihotele, iivenkile zokutyela, nolonwabo kunye nemisebenzi yenkcubeko ngokuthelekiswa nexesha elifanayo ngo-2019. kwezinye iindawo phantse i-50%.
I-Saudi Arabia ikwazise ngelizwe lokuqala lokuzonwabisa lokuhamba ngenqanawa kuLwandle oluBomvu kwiinqanawa zokuhamba ngenqanawa yeSilver Spirit, ngoSeptemba 2020. Ukuhamba ngenqanawa kwakhona kunikezelwa njengenxalenye yexesha lehlobo, neMSC Belissima isebenza ngaphandle kweJeddah phakathi kukaJulayi nangoSeptemba.
Iseti ebanzi yemigaqo-nkqubo yezempilo kunye nokhuseleko kunye nokuvavanywa kwelizwe lonke kwe-COVID-19 kuqinisekisile ukuba ukukhula kukhenketho bekungahambi nesipikha kumatyala e-coronavirus. ISaudi irekhode ngaphezulu kwe-14,700 yamatyala e-coronavirus kwisigidi sabantu kubemi, ngaphantsi komndilili wehlabathi wamatyala ayi-25,153 ngesigidi kwaye ngokungaphantsi kwezona ndawo zininzi zokhenketho lwesiko lomhlaba.
I-Saudi Arabia ikhuphe ngempumelelo iyeza lokugonya le-COVID-19 kubo bonke abemi kunye nabahlali, ngaphezulu kwe-25 yezigidi zeedosi ezilawulwa nge-28 kaJulayi. Ngaphezu kwesiqingatha sabo bonke abemi baseSaudi kunye nabahlali ngoku sele befumene umpu wabo wokuqala kwaye omnye ukuba ngabahlanu ufumene iidosi ezimbini zokugonya.
Zonke iindwendwe ziya kucelwa ukuba ziqwalasele amanyathelo okhuseleko avunywe nguMphathiswa Wezempilo abandakanya ukunxiba imaski eluntwini kunye nokugcina ukudideka kwezentlalo.
Abemi abavela kumazwe angama-49 banelungelo lokufumana i-visa yokhenketho, enokukhuseleka kwi Tyelela iwebhusayithi yeSaudi. Olona lwazi luhlaziyiweyo kwiimfuno zokungena, ngakumbi ukusuka kumazwe ane-coronavirus entsha, abahambi kufuneka bajonge kumphathi ngaphambi kokubhukisha.